Dib u soo noolee bulshada: Ku soo dir mawduucaagii hore Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 6, 2020 Isniin, Oktoobar 5, 2020 Douglas Karr
Haddii aad haysato daabacaadda WordPress sida tayda oo leh kumanaan iyo kumanaan maqaallo, waad ogtahay inaad heysato waxyaabo la yaab leh oo dhimanaya… si fudud maxaa yeelay adigu ma horumarineysid. Warbaahinta bulshada waa meel la yaab leh oo dib loogu celiyo martida ay khusayso daabacaaddaada… laakiin hawsha culus ee safka iyo jadwalka waxyaabaha hore ayaa aad ugu badan shirkadaha badankood inay la tacaalaan.
Dib ugu noqo boostada Old waa shey WordPress ah oo cajiib ah oo u suurta gelinaya daabacayaasha iyo shirkadaha haysta tanno ka kooban inay soo nooleeyaan waxyaabahaas iyaga oo dib ugu soo celinaya baraha bulshada.
Dib u soo noolee astaamaha hore ee boostada
La wadaag Warbaahinta Bulshada - Facebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business - iyo sidoo kale ka keen shabakadahaaga bulshada Buffer. Asal ahaan, dhammaan shabakadaha bulshada ee ugu caansan waa la taageeraa. Dib u soo nooleyso qoraallada hore waxay kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto waxyaabahaaga akoonno badan oo ku yaal mid kasta oo ka mid ah shabakadaha bulshada ee la taageerayo. Xaddidaad la'aan
Xakamee Wadaaggaaga - Haddii aad rabto inaad wadaagto kaliya cinwaanada qoraaladaada, ku dar hashtags, kudar qoraal dheeri ah oo dheeri ah ama soo gaabi iskuxirkaaga wadaag. Dib u soo nooleyso Qoraallada Hore waxay kuu oggolaaneysaa inaad taas sameyso, iyo inbadan.
Abuur Hashtags si otomaatig ah - U oggolow inay soo nooleeyaan qoraallada hore si habsami leh hashtags toos ah adoo ka soo qaadaya qaybaha loo qoondeeyay boostada, sumadaha, ama xitaa meelaha gaarka loo leeyahay.
Lasoco qasabadahaaga - Revive Old Posts waxay la shaqeysaa adeegyada yareynta URL ee ugu caansan waxayna la midowdaa Raadinta Ololaha Google Analytics. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto sida ay caan u yihiin qoraaladaadu isla markaana ula socdaan taraafikada ku soo socota goobtaada ee Warbaahinta Bulshada.
La wadaag Qoraallada, Bogagga, Warbaahinta, iyo Noocyada Boostada Gaarka ah - Hadday ahaan laheyd qoraallo, bogag, sawirro maktabaddaada WordPress Media, WooCommerce ama Badeecadaha Ganacsi ee Weyn, Cunnooyinka ama Mashaariicda; Dib u soo noolee qoraalkii hore ayaa kula wadaagi kara xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada.
La wadaag Qoraaladaada in ka badan hal jeer - Ha u oggolaan in qoraaladaadu yaraadaan ka dib markii aad wadaagto kaliya warbaahinta bulshada. Dib u soo nooleeya qoraallada hore waxay kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto waxyaabaha ku jira boggaaga wareegga.
La wadaag Qoraallada ku saabsan Daabac - Ma sameysay abuurista gabal yar oo cabsi leh oo ku jira boggaaga? Ha lala wadaago xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada isla marka aad gujiso badhanka daabacaadda! Muuqaalkani wuxuu kaloo la shaqeeyaa qoraallada WordPress ee loo qorsheeyay inay si toos ah u sii socdaan taariikh dambe.
Sifee Calaamadaha iyo Qeybaha Xisaab - Calaamadee Tags, Categories, iyo canshuuraha kale ee WordPress aad rabto in lagaa saaro ama lagu daro si loogu wadaago xisaab-xisaabeed. Haddii qoraalku leeyahay qayb ka reebban oo loo qoondeeyey, ka dibna lama wadaagi doono xisaabaadka meesha laga saaray qaybtaas.
La Wadaag Farqiga Farriinta - Dib u soo nooleynta qoraallada hore waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto farriimo fara badan oo isdaba-joog ah iyo kala-duwanaanta ishtag ee farriimahaaga si aad u hesho noocyo badan. Ugu gudbi fariintaada siyaabo kala duwan una hel qoraalada ugu fiican ee badalashada saamiyadaada warbaahinta bulshada.
Iskuday inaad soo Nooleyso Qoraalladii Hore
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Soo noolee Posts Old
Tags: soo dir boostada horeu dir bulshadasoo nooleeyo qoraal horesoo noolee bulshadawadaag qoraallo horela wadaag warbaahinta bulshadaWordPressplugin WordPress